Qaddiyada Somaliland oo Lagaga Hadlayo Baarlamaanka Midowga Yurub • Oodweynenews.com Oodweyne News
Waxa magaalada Brussels ee xarunta baarlaamaanka Midowga Yurub lagu qabanayaa 22-ka Bisha May ee fooda innagu soo haysa Shir Lagaga hadlayo dawladnimada Somaliland iyo dimuqraadiyadii ay u dhacday 2017-kii doorashadii madaxtooyada oo caalamku qiray xornimadeedii.
Siday werisay wakaaladda wararka Somaliland ee SOLNA, waxaa shirkan wada jir u qaban-qaabinaya ururka dalalka aan la aqoonsanayn ee adduunka iyo xildhibaan Frank Engel oo u dhashay waddanka Luxembourg oo ka tirsan Baarlamaanka Midowga Yurub.
War-murtiyeed ka soo ka soo baxay shaa qabanqaabiyeyaasha shirkan ayaa lagu sheegay in shirkani uu ka dhashay midhihii ka soo baxay doorashadii sida xorta ah uga dhacday Somaliland 13-kii November 2017-kii iyo sidii nabadgelyada ahayd ee ay xukunka iskugu wareejiyeen madaxweynihii hore ee Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynaha cusub Md. Muuse Biixi Cabdi.
Waxa kae loo ururka dalalka aan la aqoonsanayni ay ku doodeen in Somaliland ay dimuqraadiyad ugub ah ka samaysay Geeska Afrika oo ah mandaqad aan degaynayn.
Shirkan lagu soo qaadayo Jamhuuriyadda Somaliland waxa ka soo qaybgali doona masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland iyo Dr. Michael Walls oo ahaa madaxii goobjoogeyaashii caalamiga ahaa ee kor-joogtaynayey doorashadii Waddanka ka qabsoontay oo hore u amaanay hufnaantii doorashadu u qabsoontay.
Ururka waddamada aan la ictiraafin ee adduunku waxay intaas ku dareen in kulankani uu kor u qaadi doono xidhiidhka caalamiga ah iyo dedaalka Somaliland ugu jirto inay madax-bannaanideeda u hesho aqoonsi.
Waxa kale oo ay iftiimiyeen in Somaliland ay buuxisay dhammaan shuruudaha bud-dhigga ah ee laga doonayo qarammada madaxa-bannaan ee adduunka, waxaanay sheegeen in Somaliland ururka dalalka aan la aqoonsan xubin ka ahayd ilaa sannadkii 2004tii.